LA OGAADAY: Waqtiga Ay Real Madrid Doonayso In Ay Dhamaystirto Heshiiska Luka Jovic Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
LA OGAADAY: Waqtiga Ay Real Madrid Doonayso In Ay Dhamaystirto Heshiiska Luka Jovic Oo La Ogaaday.
Real Madrid ayaa suuqa ugu jirta ciyaartoy ay dib ugu dhis ugu samaynayso kooxdeedii xili ciyaareedkan sida xun u soo fashilantay.
Real Madrid ayaa qorshaysatay waqtiga ay doonayso in ay dhamaystirto gool dhaliyaha kooxda Eintracht Frankfurt ee Luka Jovic .
Zinedine Zidane ayaa doonaya in ka hor xili ciyaareedka cusub ee soo socda uu sii diyaarsado koox uu horyaalka La Liga ugula tartami karo Barcelona isla markaana uu Champions League shaqo fiican kaga qaban karo.
Wargayska AS ee caasimada dalka Spain ee Madrid ka soo baxa ayaa shaaciyay in Real Madrid ay heshiiska Luka Jovic dhamaystiri doonto todobaadka soo socda.
Real Madrid ayaa ciyaari doonta kulankeeda ugu danbeeya ee La Liga kaas oo noqon doona halka ay Zidane iyo maamulka kooxdiisa kadib ka bilaabi doonaan arimaha suuqa.
Luka Jovic ayaa kulankiisii ugu danbeeyay Frankfurt safan kara sabta marka uu ka hor yimaado kooxda Bayern Munich kulan kaas oo waliba ah mid lagu go’aaminayo haddii ay Bayern koobka difaacan karto.
Warka ayaa sheegaya in qiimaha lagu doonayo Luka Jovic uu gaadhayo 60 milyan yuro isla markaana ay Madrid diyaar u tahay in ay todobaadka soo socda soo gaba gabayso heshiiska Luka Jovic.
Laakiin marka hore Luka Jovic ayaa sabtida isku dayi doona in uu kooxdiisa Eintracht Frankfurt ka caawiyo in ay Bayern Munich ka disho rajada koobka horyaalka iyo sidii ay kooxdiisu ugu soo bixi lahayd Champions league.
21 sano jirkan reer Serbia ee Luka Jovic ayaa la doonayaa in uu safka weerarka Real Madrid kula tartamo Karim Benzema ka hor inta aanu badalkiisa rasmiga ah noqon isaga oo 10 sanadood ka da’yar xidiga reer France.
Xili ciyaareedyadii la soo dhaafay ayay Real Madrid ku soo dhibtoonaysay in ay hesho gool dhaliye fiican oo Karim Benzema la tartami kara waxayna ku soo hungowday Álvaro Morata, Borja Mayoral ,Javier Hernández iyo Mariano Diaz oo Lyon laga soo celiyay.
Luka Jovic ayaa xili ciyaareedkan wacdaro soo dhigay wuxuuna soo dhaliyay 27 gool kadib markii uu saftay 47 kulan waana sababta dhabta ah ee ay Real Madrid u doonayso in ay kooxaha Yurub uga hor qaado 21 sano jirkan reer Serbia.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la fahansan yahay in Real Madrid ay haddaba heshiis la sii gaadhay Luka Jovic waxaa la sugayaa in todobaadka soo socda heshiiskiisa la dhamaystiri doono.